विशाल बजार कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ७ मंसिर २०७७)
पछिल्लो कारोबार दिन बिहीबार विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस दिन कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३ हजार ३२९ पुगेको हो ।
यस कम्पनीको शेयर मूल्य विगत १२ दिनदेखि उकाले लागेको छ । शेयर मूल्य १३ दिनमा १ हजार ५६९ रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । बिहीबार कम्पनीको रु. १५ लाख २४ हजार ३९ बरावरको ४६१ कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको छ ।
कम्पनीले आव ०७२/७३ बाट वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छैन । बिहीबार टपटेन शेयर मूल्य बढ्नेमा यो कम्पनी पाँचौं स्थानमा रहेको छ । यस दिन विशाल बजार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेसँगै व्यापार समूहको परिसूचक ९ दशमलव ९४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको ५२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतोमा रुबोजू आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले हालको प्रवृत्ति बुलिसमा रहेको संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्टजोन ८४ दशमलव ४७ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद चाप बढी रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ३७२ दशमलव ९५ बिन्दुमा छ । उतारचढाव बढी देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि धेरै हुन्छ भने प्रतिफल पनि धेरै प्राप्त हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कादेखि टाढिएको छ । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । बिहीबारको शेयर मूल्य रु. ३३२९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. २५७५ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको हालको शेयर मूल्य ५२ दिनयताकै उच्च हो ।